Sakafo amin'ny fampinonoana. Ny sakafo mahavelona amin'ny renim-pianakaviana amin'ny volana voalohany
Ny fampinonoan-toaka - torohevitra tsara ho an'ny reny mampinono
Ny rononon'ny reny dia sakafo mahavelona sy mora azo ho an'ny zaza. Ho an'ny zaza vao teraka - ity no fomba tsara indrindra hahazoana ny singa ilaina, ilaina amin'ny fampivoarana tsara ny tanora sy ny fiarovana azy amin'ny aretina isan-karazany.
Ny zaza vao teraka - torohevitra
Ny torohevitra momba ny fampinonoan-tena dia hanampy amin'ny fampivoarana tsara ny zaza. Noho izany dia ilaina ny mamaky soso-kevitra vitsivitsy:
ampiharo eo an-tratra ilay zaza raha vantany vao teraka;
Aza omena azy avy amin'ny tavoahangy mandra-pahatongan'ny zaza ampiasaina hanamboarana ny tendron-tsakafo;
Omeo tratra ny zaza, raha vao mangataka izy dia avelao hihinana araka izay tiany izy;
Aza asolo ny tavoahangy amin'ny alina.
Torohevitra momba ny fampinonoan-tsakafo tany am-piandohana
Taorian'ny fiterahana dia manana colostrum ny reniny . Amin'ny ora voalohany aorian'ny fijerin'ny zazakely, manomboka mitondra sakafo. Mitroka mandritra ny 3-4 andro ny milina. Rehefa manomboka ny fampinonoana, manome torohevitra momba ny fampiharana azy ny dokotera, saingy ny toro-hevitra ankapobeny dia:
Aza afeninao ny tratranao, ary aza misotro rano be loatra;
Mamelà ny fidiram-bolany madinika. Raha manohy mampalahelo ilay bust, dia asehoy ilay ronono.
Ireo ray aman-dreny hoavy dia handray soa avy amin'ny lisitr'ireo toro-hevitra mikasika ny loha laharana amin'ny fampinonoana, ny torohevitry ny renim-pianakaviana dia toy izao manaraka izao:
Ny fiterahana miaraka amin'ny cesarean na ny fametrahana ilay zazakely eo amin'ny tratra aorian'ilay ora voalohany aorian'ny nahaterahana, dia miteraka fahantrana amin'ny endriky ny ronono.
Manomboka amin'ny fampinonoana ny tazomoka, ny torohevitry ny vehivavy mampinono dia mihena amin'ny fikarakarana ny tebiteby amin'ny zaza mandritra ny fampiharana voalohany (izany dia hamonjy ny tratran'ny tsindry sy ny fahatsapana mampihetsi-po amin'ny sakafo ho avy).
Tsy azonao atao ny maka ny tratra, ny zaza mihitsy, noho izany dia tokony hanampy ilay zaza ianao. Sokafy ny vavan'ny ankizy, atoroy azy eo akaikiny, ny vavan'ny zaza dia tsy eo amin'ny tadin-dokanga ihany, fa koa mba hisambotra ny isola.
Ny fampinonoan-toaka - torohevitra momba ny fampinonoan-dreny, sakafo
Tsy tokony hampiakatra firy ny fihinanana ny renim-pofon'ny zaza vao teraka. Aza maty, mila mihinana sakafo vaovao sy salama ianao. Ny vokatra izay tafiditra ao amin'ny sakafo mahavelona amin'ny renim-pianakaviana, dia mizara ampahany kely ary hihinana imbetsaka isan'andro. Eritrereto ny fialan-tsasatrao ary mihinana araka ny fanirianao, dia manàna hatrany zavatra azo atolotra ho an'ny sakafonao.
Sakafo ho an'ny reny mampinono
Ny sakafo voalohany noraisin'ny zazakely dia ny rononon-jaza. Noho izany, ny sakafo amin'ny renim-pianakaviana amin'ny volana voalohany dia tokony hofidiana manokana, ohatra:
misotro rano 2.5 litatra, saika ny zavatra rehetra dia handeha ho any amin'ny lactation;
mihinana 300-350 g voankazo sy voankazo isan'andro (karazana, afa-tsy ivelany);
Ampidino amin'ny trondro sakafo (hake, cod), mofo boribory, voankazo (mozika, buckwheat, oats), vokatra avy amin'ny ronono, voatoto / voanio, dibera (voninkazo, 15 g / andro katsaka, 30 g / andro katsaka), pasta (avy amin'ny karazana mafy);
legioma (karôta, voninkazo, jono) - 450 g / andro amin'ny endrika mofomamy na fofona;
marshmallow, pastille (avy amin'ny voajanahary voajanahary) in-droa isan-kerinandro amin'ny ampahany kely.
Amin'ny 2-6 volana aorian'ny ainy, dia afaka mampifandray ireo vokatra vaovao ny zazakely ary manamaivana kely ny isan'ireo efa nomena azy taloha:
Azo atao ny mampihena ny habetsaky ny voankazo sy legioma mena (seasonal), ampiana sakafo mahandro, tongolobe vaovao;
hena (bitro, akoho, voanio)
Eat lean borsch, izay manamboatra voatabia voatabia na voatabia voatabia;
Sakafo (esorina pistachios, voanjo);
voankazo voajanahary, jiro voajanahary;
tantely, menaka amin'ny paoma na serizy;
Toeram-pisotroana (mints, balom-bary, Basil, thyme).
Manomboka amin'ny volana faha-6 amin'ny fiainan'ny zaza ary hatramin'ny herintaona dia azo zaraina maimaim-poana izany vokatra izany:
tsaramaso, fa tsy sakafo matavy;
ronono, atody, soja, vokatra misy gluten;
sôkôla, voankazo hafakely (ny tsirairay dia ampidirina amim-pitandremana, iray isan-kerinandro), seafood, tongolo lay. Ny fanandramana amin'ny sakafo vaovao dia tsara indrindra amin'ny maraina.
Amin'ny enim-bolana na herintaona, dia tsy miraharaha ireo torohevitra nomena teo aloha. Ny sakafo hohanina etsy ambony dia mirakitra sakafo izay hanampy anao tsy hitazona ny endriny rehefa teraka sy hanana fahasalamana tsara, ka hanome azy ny singa ilaina amin'ny fandrosoana sy ny fitomboana. Hatramin'ny fotoana maha-bevohoka dia ilaina ny manaisotra soda, sira, fifohana sigara, saosisy, sakafo amin'ny sakafo.
Ny sakafo fihinanana sakafo
Ny reny mampinono dia tokony hahatsiaro fa ny fifadian-kanina "amin'ny fahazoana mavesatra" na ny fihinanana ny roa dia tsy tokony. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny manomboka mihinana tsara. Ny sakafo mandritra ny fampinonoana ny zaza vao teraka dia tokony ahitana piramida misy zavatra ilaina: proteinina, ny matavy, ny voambola. Manomàna farafahakeliny intelo isan-kerinandro, misakafo 2 heny isan'andro ny sakafo mahamay, miova amin'ny sakafo maivana.
Ny fihinana hypoallergenic ho an'ny reny mampihetsi-po dia midika ny fanilihana avy amin'ny sakafo (mandritra ny 2-3 volana) amin'ny vokatra izay mampisy ny tsy fahampian-tsakafo ao amin'ny ray aman-dreny. Rehefa mampifandray sakafo vaovao, dia diniho ny zazakely: ny fanamaivanana, ny fiovan'ny "kitapo" dia manondro ny mety ho fihetsiky ny alikaola. Ny fampiharana ny fitsaràna (miaraka amin'ny vokatra vaovao) ny fampinonoana, ny torohevitra rehetra amin'ny renim-pianakaviana dia tsy tokony hohadinoina. Mba hahazoana antoka ny mety ho fihetsiky ny olona iray dia midira amin'ny vokatra iray mandritra ny iray volana.
Olana amin'ny fampinonoana
Raha manaraka ny fitsipika rehetra ianao (mitandrema ny tratranao, mamono), mila mahita ny fototry ny olana ianao, ary fantaro ny antony mahatonga ny mpitsabo mpanampy tsy manana ronono. Mety misy antony telo mahatonga izany toe-javatra izany: lactostasis, mastitis na hypogalactia. Ny olana amin'ny fampinonoana eo an-dreny dia tsy tokony ho fialan-tsiny amin'ny famongorana ny zazakely avy amin'ny tratra.
Ny famoahana ronono dia azo atao aorian'ny 2-6 andro aorian'ny fiterahana. Ny Lactostasis dia manomboka noho ny fahatarana amin'ny famoahana ny tratra. Anatin'ity tranga ity dia ilaina:
Manosotra azy mandritra ny fiterahana amin'ny tendrontany;
decant ny sisa amin'ny ronono aorian'ny sakafo;
Atsaharo ny famafazam-biriky mafana eo amin'ny bust.
Mastitis - fanakanana ny ronono. Ny aretina dia miteraka ny fisehoan'ny mari-pana, ny tratra manintona. Raha nahazo loko maitso sy fofona tsy mahafinaritra ny seza-n'ilay zazalahy, dia tokony hampiato ny sakafo. tao anatin'ilay ronono no nahitako. Fomba fisorohana:
Famarotana ny ronono (pompon'ny solika fotsiny!);
Mitondrà bika tsy misy pintsy;
Aza mihoatra ny tratra.
Ny Hypogalactia dia tsy fahampian'ny famokarana ronono. Noho ny tsy fahampian'ny vokatra iray dia lasa tsy misy dikany ilay zazakely. Ny aretina no antony mahatonga ny zazakely tsy miraharaha ny fampinonoana, ny dokotera dia afaka manome toro-hevitra ny reniny. Izy no handidy ny vokatra azo avy amin'ny fanafody (indrindra amin'ny fiomanana amin'ny voamaina), manorata ny sakafo ary manentana fomba iray hanehoana ronono.
Tsy misy ronono aorian'ny fiterahana - inona no tokony hatao?
Indraindray ny sakafo tena ilaina amin'ny taona voalohany amin'ny fiainan'ny zazakely dia very noho ny fandidiana mandritra ny fiterahana. Mummies manontany tena hoe: "Inona no tokony ataoko raha tsy misy ronono aorian'ny sezareana?". Raha ny tokony ho izy, dia hita fa colostrum. Ampy tsara ny manome karapuzu ny fitsipika ilaina amin'ny sakafo. Ny olana amin'ny famokarana dia voatery misy antony maromaro:
tsy azo atao ny mampihatra voalohany ny tratra;
ny fahazarana amin'ny zazakely mankany amin'ny tendron'ny;
ny fahatongavan'ny ronono;
anesthesia na antibiôtika natao ho an'ny mpitsabo mpanampy.
Aorian'ny fandidiana, dia homena zazakely ianao. Ampio ny fikarakarana mandritra ny 6 ora voalohany amin'ny bika aman'endriny, amin'izao fotoana izao, ny asa an-kitsiky ny zaza dia tena ambony. Aza avela homen'ny zazakely avy amin'ny tendrony alohan'ny hampiharana azy amin'ny tapa-tongotra, dia ho sarotra aminy ny manitsy ny tratra. Ampio ilay zaza: alao ny tratra manakaiky ny halo ary manandrana mametraka ilay tendrony lalindalina kokoa amin'ny vavan'ny zazakely.
Tsy ampy ny ronono amin'ny fampinonoana
Ny toe-piainana izay tsy ampy sakafo ny zaza vao teraka dia antsoina hoe hypogalactia. Ahoana no ahafantarana fa tsy ampy ronono ilay zaza? Fantaro fa hanampy ny zaza ny:
ny karapuz dia tsy matory amin'ny faran'ny sakafo, fa mihodina sy maneho tsy fahafaliana;
Mifoha maraina kokoa noho ny fotoana voatondro ho an'ny sakafo;
Misy seza "noana" - tsy fahita firy, matevina ao anaty fiaraha-miasa, maizina kokoa.
Matetika ianao no maheno ny fanontaniana momba ny ray aman-dreny, izay ahitana ny lohahevitra momba ny fampinonoana sarotra, ny torohevitra rehetra amin'ny renim-pianakaviana dia mihena mora, mahafa-po ary mahomby:
Matory mandritra ny ora roa eo akaikin'ilay zaza;
Omeo tratra ho an'ny tsirairay avy aminy ny zazakely, satria ny tsy mihinan-kanina dia sarotra kokoa ny mitahiry tadidy;
manasitrana ilay fipoahana: isaky ny 7-10 minitra, milatsaka ny ronono milentika, aorian'izany - manohy ny fanentanana.
Ny zanaka dia mandà ny tratra
Maro ny antony mety mahatonga ny tsy fahombiazan'ny zaza amin'ny tratra:
fampiasana sombina na sifotra;
tsy mety ny tendron-drano;
Ny fisarahana mahery vaika avy amin'ny tratra na tsy firaharahiana ny faniriany hisakafo.
Reny, izay miahiahy momba ny fanontaniana hoe "inona no tokony hatao raha tsy mandray ny tratra ny zazakely?", Tokony hampitony ianao ary hahatakatra fa misy fomba maromaro hanampiana anao hahatsapa ny fifandraisana amin'ny zaza bebe kokoa, ka hampiditra azy amin'ny fifehezana an-tsitrapo amin'ny tapa-tongotra:
Matetika ny mitaingina zazakely eo amin'ny sandriny na amin'ny antsamotady;
Aza mamily ny zaza eo an-tanan'ny olon-tsy fantatra, zara fa manome azy ho an'ny havana;
Ataovy azo antoka fa mifandray amin'ny hodiny ny zaza;
Manaova bany miaraka amin'ny nono malalaka raha tiany ny fomba fitsaboana rano;
Matory amin'ny zaza, indrindra amin'ny alina.
TORO-HEVITRA momba ny fampinonoana
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia mikendry ny hamorona fiaraha-monina salama. Ny fitsipiky ny fampinonoana ny soso-kevitry ny OMS dia hiantoka ny fanomezana sakafo ara-dalàna ny zaza, izay akaiky ny reniny. Fitsipika fototra avy amin'ny fikarakarana fahasalamana:
ataovy ny fampiharana voalohany ao anatin'ny adiny iray aorian'ny fiterahana;
miaraka amin'ny zaza vao teraka ao amin'ny paroasy iray;
Mamelà ny zazakely amin'ny fangatahana voalohany, ary aza maka ny zazakely avy amin'ny buste;
Aza omena ranon-javatra hafa afa-tsy ny rononon-jaza.
esory ny sotrokely sy ny tavoahangy;
Ny zaza vao teraka mandra-pahatongan'ny zaza dia 1 hatramin'ny 3 taona.
Amin'ny fampiasana torolàlana tsotra, ny mama dia hiteraka amin'ny fomba tsara, ary amin'ny alàlan'ny fisorohana, amin'ny fotoana iray, ny mety ho voka-dratsy amin'ny tendrontany sy ny bust. Ho an'ny fitsipika ankapobeny dia ampio bebe kokoa: Aza avela hisy fiantraikany goavana eo amin'ny fampiharana, andro sy alina, izay matetika no miezaka mamolavola ny famokarana ronono, jereo foana raha efa nitelina ny sakafo ny zazakely.
Fiomanana ho an'ny fihomehezana
Inona no antibiotika misy amin'ny fampinonoana?
Monorisy amin'ny fampinonoana
Fanafody fanaraha-maso ny fampinonoana
Ahoana ny fandondonana ny hafanan'ny reny mampinono?
Sakafom-biby miavaka - ahoana no hanomezana sakafo?
Sary Afovoan'ny Tafika Afrikana Tatsimo
Ny sakafo inona avy amin'ny magnesium B6?
Ahoana no hamaritra ny haben'ny headgear?
Teethers amin'ny nify
Kofehy karbona - inona no safidy tsara kokoa hisafidianana ny fanamafisana ny trano?
Monastera ao St. Neophyte ilay Famaritana
Ahoana no hialana amin'ny buggy?